ST-usoro Machine Nka na ụzụ Description -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
110 Ton C ụba Single Point Crank nkenke Press
1 Akụrụngwa akụrụngwa, aha na oke ：
3.1 Akụrụngwa ahụ dịka ọkọlọtọ nyocha JIS dị na Japanese 1:
5. Nka na ụzụ chọrọ
(1) Ugboro ugboro nkwụsị ọgwụgwọ nke slide ndu okporo ígwè, ekweghị ekwe n'elu hrc45,
Uru:ukwuu mma eyi eguzogide. (ndị ọzọ na-emepụta ihe anaghị enwe ọgwụgwọ na-agwụ ike)
(2) Igwe elu nke ihe mmịfe ahụ na okporo ụzọ dị elu dị ka ra0.4-ra0.8,
Uru:nkenke dị elu na ejiji dị ala. (enweghị ọgwụgwọ na ịgha ọka site n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ)
(3) Okpokoro nke uzo ndu slide bu 0.01mm / m, nkenke di elu.
(4) Ihe ikuku sekit anyị niile bụ SMC Japan. (ndị ọzọ na-emepụta ihe na-eji ngwaahịa anụ ụlọ eme ihe).
(5) Anyị na-anabata American MAC brand maka ikuku spraying solenoid, nke nwere nnukwu uche nke ikuku spraying mmeghachi omume.
(6) The crankshaft mere nke 42crda bụ ihe kasị mma na China
Uru:ike dị 30% karịa nke ígwè 45, na ndụ ọrụ dị ogologo. (ndị ọzọ na-emepụta ihe na-ejikarị 45 ígwè)
(7) A na-eji zqsn10-1 (Tin Phosphorus Bronze) mee ọla kọpa ahụ (nke yiri ọla kọpa Aida). Ndị nrụpụta ndị ọzọ nabatara bc6 (ọla kọpa dị elu, nke a makwaara dị ka ọla kọpa 663), nwere ike 50% (nrụgide n'elu ala) karịa ọla kọpa nkịtị, ọ na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide, Nkọwa ziri ezi na ndụ ogologo ndụ.
(8) Ngwunye anyị niile bụ Φ 6, na mmanụ mmanụ dị mma ma ọ dịghị mfe igbochi. (ndị ọzọ na-emepụta ihe na-ejikarị Φ 4)
(9) Oche oche bọl na-eji ọla edo TM-3 ejiri ọla edo (otu ihe ahụ Aida)
Uru: ihe puru omume nke aru na-ebelata nke ukwuu (ndị na-emepụta ihe n'ozuzu bụ iron).
⑴ Transportgbọ njem na nchekwa nke akụrụngwa:
⑵ Ebuli akụrụngwa:
Screen Ihuenyo mmetụ aka gosipụtara mkpụrụ edemede China (ma ọ bụ gbanwee n'etiti Chinese na Bekee), nke dị mfe ma dịkwa mfe nghọta, na egosiputa usoro data dị iche iche nke pịa, dị ka ọnụọgụ strok, kọntaktị CAM electronic, wdg. -atọ site na ihuenyo mmetụ;
③ Ngosipụta nke ozi na ọdịda, nke mere na ndị na-arụ ọrụ na ndị na-edozi ya ngwa ngwa iji dozie nsogbu ndị na-ebipụta akụkọ, belata oge;